Zvinonyanya kufarirwa zvepasirose zvepasi rose zvinonzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Zvinonyanya kufarirwa zvepasirose zvepasi rose zvinonzi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Italy Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • nhau • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nzvimbo mbiri dzeUSA dzakazviita pachiratidziro chezvinonyanya kudakadza nyika
Eiffel Tower muParis, France inoramba iri yekukwezva kudanana kwazvo pasirese
Inozivikanwa nekukurudzira mukurumbira pendi Monet, Seine River iyo inotambanuka kuburikidza neParis ndeyechokwadi rudo
Ngano yeTrevi Fountain ndezve rudo uye inoti kana ukakanda mari imwe mutsime uchadzokera kuRoma, kukanda mari mbiri zvinoreva kuti unodzoka wodanana, uye kukanda mari nhatu zvinoreva kuti uchadzoka, uwane rudo uye roora
Mamirioni evadikani vanodirana kunzvimbo dzerudo kutenderera pasirese kubhadhara mutero kurudo gore rega. Tichitarisa zvinokwezva pasirese, tsvagiridzo nyowani inoratidza kuti zviriko zvinokwezva, izvo zvinoita kuti kudanana kuve kwakanyanya
1. Eiffel Shongwe - Paris, France
1,303 kudanana kutaurwa
Izvo chaizvo hazvishamise kuti kukanda runyorwa ndiyo iyo Eiffel Tower muParis sekukwezva kudanana kwazvo munyika! Paris inozivikanwa seGuta reRudo uye ichi chiyeuchidzo chinoonekwa sechiratidzo cherudo nekuda kwekuvakwa kwayo kunoshamisa uye kutaridzika kwemaonero mukati meguta, nevaroorani vazhinji gore rega rega vachiita kuroorwa pasi peichi chinokwezva chinoshamisa. Oh là là!
2. Chitubu cheTrevi - Roma, Italy
1,265 kudanana kutaurwa
Kuuya wechipiri nderimwe rematsime ane mukurumbira pasi rose, iro Tsime reTrevi, muRome. Ngano yeichi chitubu ndeye rudo uye inoti kana ukakanda mari imwe mutsime unodzokera kuRoma, kukanda mari mbiri zvinoreva kuti uchadzoka ndokudanana, uye kukanda mari nhatu zvinoreva kuti uchadzoka, uwane rudo uye roora. Amore.
3. Grand Canal - Venice, Itari
1,154 kudanana kutaurwa
Grand Canal muVenice, Italy inouya yechitatu. Guta Rinoyerera, iro rava kuzivikanwa sa, rinozivikanwa nemigwagwa yaro mikuru inofamba-famba, inoita kunge isingagumi migero, varoorani pama gondolas uye nezvakanaka uye zvinwiwa zveItaly. Zvinenge zvakaoma kuti usabatike murudo rweguta rino.
4. Seine Rwizi - Paris, France
1,130 kudanana kutaurwa
Rwizi rweSeine muParis runoita chechina. Inozivikanwa nekukurudzira mukurumbira wemupendi Monet, rwizi rwunotenderera kuburikidza neParis zvechokwadi nderwe rudo. Iine vakaroorana vanofamba-famba padivi perwizi kana kufamba pariri pazvikepe, inotora mwenje weguta zvakanaka, mukati mehusiku neusiku ihwohwo.
5. Matsime eBellagio - Las Vegas, USA
1,120 kudanana kutaurwa
Zvitubu zveBelgio muLas Vegas zvinouya zvechishanu pane zvakanyorwa. Gara mukati megungwa re8-acre pakati pehotera uye inozivikanwa Las Vegas Strip, tsime rinobatanidza pyrotechnics nemumhanzi kugadzira inoshamisa kwazvo tsime remvura kuratidza. Vazhinji vakaroorana vanosarudza kuroora pabhawa raBellagio rinotarisa tsime.